Ogaden News Agency (ONA) – Shaqaale Ushaqaynayay Shirkada Korantada Itoobiya oo La Afduubay.
Shaqaale Ushaqaynayay Shirkada Korantada Itoobiya oo La Afduubay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in la afduubay shaqaale ushaqaynayay shirkada korontada ee Itoobiya.
Sida xogta aan kuhelay shaqaalaha ayaa la afduubay iyagoo saaran baabuurkii ay kushaqaynayeen waxaana lala tagay iyagii iyo baabuurkoodiiba lamana garanayo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen.
Xukuumada wayaanaha ayaa afduubka shaqaalahan ku eedaysay jabhadaha kasoo horjeeda wayaanaha kuwaas oo sida ay xukuumada gumaysigu sheegtay ku howlan sidii ay u dhibaatayn lahaayeen shaqaalaha dowlada.
Afduubka dadkan shaqaalaha ah ee ushaqaynayay shirkada korantada ee Itoobiya ayaa muujinaysa tabar yarida kooxda TPLF iyo sida ay udagan yihiin shaqaalaha ushaqeeya wayaanaha.
Shirkado iyo maalgashato ajnabi ah ayaa wadanka iskaga huleelay kadib markay kooxda TPLF hananwayday amaankooda isla markaana dhowr jeer hantidoodii lagu gubay gobolka Oromia halkaas oo ay kulahaayeen ganacsiyo kala duwan.
Sikastaba ha ahaatee ciidamada gumaysiga Itoobiya ayaan wax rajo ah kaqabin in ay wax kaqabtaan xaaladaha qalafsan ee wadanku uu galay isla markaana waxay ciidamudu cadeeyeen in aysan qaadi karin amaanka shaqaalaha dowlada iyo shirkadaha shiyeeye.